Huawei kesara ihe karịrị nde ekwentị 28 na Q1 | Gam akporosis
Huawei gara n'ihu ịkụ nzọ ruo afọ a maka ihe nyere ya ikike bilie na nke atọ dịka onye nrụpụta kasịnụ nọmba ekwentị nke ụwa. Ọbụna n'afọ a 2016 enweela ike itinye Leica na Huawei P9, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ bụghị dị ka anyị ga-achọ, ọbụlagodi ịnye ndị ọrụ kwenyere ịzụta nke ọkọlọtọ ya dị elu.
Ugbu a anyị maara na onye na-eme smartphone nke Huawei nwere kesara ihe karịrị ekwentị 28,3 na nkeji iri na ise nke afọ nke anyị nọ na ya. Nke a sụgharịrị ịbụ ịrị elu nke 65% kwa afọ; nanị ihe ngosi na pacenti nke kwesiri ime ka ndi ozo zoo n'ahịa a siri ike.
Onu ogugu a gunyere nkeji abuo na isii nke P2,6 na P9 Plus ndi nke ekesara na oge gara aga n’April nke afo 9. Ugbua n’aho ozo o nwere onu ogugu nke mmadu 2016 kesara n’afọ a, ka ugbua tinye aka 140 nde ọnụ maka afọ a.
Na nso nso a enwere ụfọdụ asịrị na ụlọ ọrụ ahụ nwere gbadara ya lekwasịrị anya na 2016 site na nde 140 ruo 120. Agbanyeghị, Huawei ekwupụtaghị ihe ọ bụla banyere ya, nke na-egosi na ọ nweghị mgbanwe na ebumnuche maka afọ a.
A Huawei nke na-aga n'ihu ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ dị mma maka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke afọ Na nke ahụ, ozugbo anyị matara banyere nke abụọ, anyị ga-enwe ike ịmatakwu ihe anyị nwere ike ịtụ anya na ụlọ ọrụ a ma ọ bụrụ na ọ ga-enwe ike iru ihe mgbaru ọsọ nke nde ekwentị 140 a na-ere naanị otu afọ. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ijide uto a, anyị amaghị n'ezie ihe ụlọ ya ga-adị ka ọ nweworo ike ịdebe kwa afọ na ọbụna kwupụta na ị na-arụ ọrụ na gị onwe gị OS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei jisiri ike kesaa ihe karịrị nde ekwentị iri atọ na asatọ na nkeji iri na ise nke afọ
Atọ nzọụkwụ iji chebe gị gam akporo ngwaọrụ